पाँचथर नरसँहार हत्याकाण्ड : कस्तो दुर्भाग्य! यदि आशिका मानेकि भए… - Khabar Time
पाँचथर — बुद्धिमाया गत महिना माइतीघर आरुबोटे पुगेकी थिइन् । माइत जानुको उद्देश्य भेटघाट मात्र थिएन, छोरीहरूलाई दमक घर ल्याउनु पनि थियो । उनका तीन छोरी सीता, आशिका र बिना मावलीघर बसेर पढदै थिए । नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरु भएको मौकामा उनले माइली आशिका र कान्छी बिनालाई दमक झार्न खोजेकी थिइन् । आशिकाले ‘बाजेबोजुलाई सघाउँछु, यतै पढ्छु’ भनेर जिद्दी गरिन् । आशिका नमानेपछि बुद्धिमाया कान्छी छोरी बिना लिएर वैशाख १८ मा घर झरिन् ।
मंगलबार बिहान माइती गाउँबाट आएको फोनमा जे खबर सुनिन्, बुद्धिमाया हल न चल भइन् । सोमबार राति बुबाआमाको मात्र होइन, आफ्नै छोरी आशिकाको पनि हत्या भएको थियो । जेठी छोरी सीताले भने भागेर ज्यान बचाएकी छन् । माइली दिदी–भिनाजुको परिवार पनि सखाप भएको थियो । बुद्धिमाया मंगलबार दिउँसो माइती आइपुगेकी छन् । ‘वैशाखमा मैले भनेको आशिकाले मानेकी भए।।।,’ उनी थकथकाइन् । आशिका कक्षा ७ मा पढथिन् । उनी कक्षा ६ को वार्षिक परीक्षामा तेस्रो भएकी थिइन् । पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर बुद्धिमायाले दोस्रो बिहे गरेकी थिइन् । उनका छोरीहरू आरुबोटेमा बस्दै आएका थिए ।
मनिटर थिइन् युहाना :सोमबार रातिको घटनाले युहाना सेर्माका साथीहरू स्तब्ध छन् । युहाना आरुबोटे माध्यमिक विद्यालयमा ९ कक्षाको ‘मनिटर’ थिइन् । ‘युहाना जान्ने विद्यार्थी थिई, नजानेको कुरा सोध्दा हामीलाई सिकाइदिन्थी,’ साथी पवित्रा तामाङले सम्झिन् । त्यस घटनामा युहाना, उनकी बहिनी मुना, बुबा धनराज र आमा जस्मिताको घरभित्रै हत्या भएको थियो । मुना पनि त्यही विद्यालयमा कक्षा ४ मा पढ्थिन् । उनी कक्षामा दोस्रो हुन्थिन् । शिक्षकले उनलाई पनि मनिटर बनाएका थिए । धनराजका दाजु मासिमप्रसादकी एक्ली छोरी इक्साले पनि त्यही घरमा ज्यान गुमाइन् । उनी आरुबोटेकै एजुकेसनल बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा १ मा पढ्थिन् । सीता र आशिका खजुम पनि आरुबोटे माविमै पढ्थे ।
विद्यालय नजिकैको घरमा घटना देखेका आसपासका बालबालिका तीन दिनदेखि विद्यालय गएका छैनन् । विद्यार्थी नआएपछि पठनपाठन बन्द छ । ‘स्कुल खोलिरहेका छौं । कोही विद्यार्थी आउँदैनन्,’ प्रधानाध्यापक भवेन्द्रकुमार राईले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
‘बोजु, बोजु !’ गहिरो निद्रामा रहेकी कान्छीमाया फियाकले मधुरो स्वर सुनिन् । आफूलाई नै बोलाएको ठम्याएपछि ‘को हो ?’ भनेर सोधिन् । ‘ढोका खोल्नू न,’ उताबाट आत्तिएको स्वर सुनियो । पाँचथरको मिक्लाजुङ–३, आरुबोटेमा सोमबार राति हत्या गरिएका बमबहादुर र बिर्छाहाङमा फियाकका जेठी छोरी बुद्धिमाया र साइँली छोरी दिलमाया बुधबार माइतीको आँगनमा । तस्बिर : अर्जुन । कान्तिपुर
चकमन्न रातमा बाहिर पानी पर्दै थियो । आकाश गड्याङगुडुङ गर्दै थियो । यस्तो बेला को हो, के हो दोधार पर्दै कान्छीमायाले जसै ढोका खोलिन्, सीता खजुम बेगिएर घरभित्र छिरिन् । रगत देखेपछि कान्छीमायाले हत्त न पत्त ढोका बन्द गरी पनि हालिन् । उनले सोधीखोजी गरिन् ।‘सबैलाई सखाप पार्‍यो !’ सीताले ओठ कमाउँदै सानो स्वरमा यति मात्र भन्न सकिन् । त्यसपछि पानी मागिन् । पानी बाहिर बरन्डामा थियो । आफैं डरले थरथरी भइसकेकी कान्छीमायाले ढोका खोलेर बाहिर जाने आँट गरिनन् । लगत्तै सीता बेहोस भएर ढलिन् । कान्छीमाया पनि डरले रातभर काँप्दै बसिन् ।
भोलिपल्ट बिहान गाउँलेले कान्छीमायालाई बोलाए । उनले ढोका खोलेपछि थाहा पाइन्, करिब १० मिटर पर रहेको सीताको मावलीघरमा चार जनाको संहार भएछ ! मिक्लाजुङ–३, आरुबोटेस्थित घरमा सीताका बाजे बमबहादुर र बोजु बिर्छाहाङमा फियाक सधैं ५ बजेअगावै उठेर आगो फुक्थे । खसीबाख्रालाई घाँस हाल्ने गर्थे । मंगलबार बिहान भने ५ बजेसम्म पनि त्यस घरमा चहलपहल नदेखिएपछि छिमेकी पुगेका रहेछन् । जब त्यहाँ पुगे, ७४ वर्षीय बमबहादुर, उनकी श्रीमती बिर्छाहाङमा, कान्छी छोरी ३३ वर्षीया मनकुमारी, नातिनी १२ वर्षीया आसिकाका शव क्षतविक्षत देखे ।
बमबहादुरका माइली छोरीज्वाइँको परिवारको पनि त्यसै रात हत्या भएको थियो । बमबहादुरको घरदेखि करिब एक किलोमिटर दूरीमा घर रहेका ज्वाइँ ४१ वर्षीय धनराज सेर्मा, छोरी ३६ वर्षीया जस्मिता, छोरीहरू १३ वर्षीया युहाना, ७ वर्षीया मुना र भतिजी ६ वर्षीया इक्साको हत्या भएको हो । ५१ वर्षीया कान्छीमाया छिमेकमा भएको घटनापछि राम्ररी निदाएकी छैनन् । खाना रुचेको छैन । ‘अब कहाँ बस्ने, कसरी बस्ने ?’ चिन्ताले पिरोलिएकी छन् ।
यसरी बचिन् नातिनी : मुकुन्डो लगाएर आएको व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गर्न थालेपछि सीता भागेर कान्छीमायाको घर पुगेकी थिइन् । दौडने क्रममा लड्दा ढुंगाले उनको हातमा गहिरो चोट लागेको छ । दमकस्थित लाइफलाइन अस्पतालमा उपचाररत उनको अवस्था सामान्य रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । सीतालाई मानसिक दबाब नपरोस् भनेर प्रहरीले अरूसँग खासै कुराकानी गर्न दिएका छैनन् । १२ वर्षीया सीता मावलीघर बसेर स्थानीय स्कुलमा ९ कक्षा पढ्दै थिइन् ।
धामी बसिसकेपछि घटना : सोमबार राति बमबहादुरका माइली छोरीज्वाइँ जस्मिता र धनराजको घरमा धामी बोलाइएको थियो । राति करिब ११ बजेसम्म सेर्माको घरमा धामी बसेको जस्मिताकी जेठी दिदी दिलमाया लिम्बूले बताइन् । ‘धामी बसिसकेपछि घटना भएको रहेछ,’ उनले भनिन् । वैशाख ३० गते धनराजको घरको नुनको बट्टामा सिसाका टुक्रा फेला परेको थियो । नुन मिसाएर पकाएको खाजा खाँदा ८ जना बिरामी भएका थिए । घरमा नराम्रो घटना भएपछि धनराज र जस्मिताले जोखाना देखाएर सोमबार राति धामी बसाएको दिलमायाले बताइन् । समाजकी अगुवा जस्मिता ढाका बुनाइको कुशल प्रशिक्षक थिइन् । उनले आफ्नै घरमा करिब एक दर्जन महिलालाई ढाका बुनाइ तालिम दिइरहेकी थिइन् । उनी नजिकैको आरुबोटे माविको व्यवस्थापन समिति सदस्य पनि थिइन् ।
‘टुहुरा भयौं’: हत्याकाण्डपछि बमबहादुर र धनराजको परिवारै सखाप भएको छ । बमबहादुरका चार छोरीमध्ये दुई छोरी र एक ज्वाइँको हत्या भएको छ । एक ज्वाइँ झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन् । घटनाको खबर सुनेपछि माइती पुगेका दिलमाया र बुद्धिमाया शोकाकुल छन् । ‘हाम्रो त आफ्नो भन्ने कोही रहेन,’ बुद्धिमायाले भनिन् । उनले हत्यामा संलग्न जो भए पनि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरिन् । ‘परिवारलाई सखाप पार्नेले हामीलाई पनि मार्ने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ,’ दिलमायाले भनिन् ।
एकै ठाउँ सुत्छन् गाउँले : हत्या घटनापछि बमबहादुर फियाकको घर भएको टोलका गाउँले राति एक्लाएक्लै सुत्न सकिरहेका छैनन् । बीभत्स घटना देखेका गाउँले राति एकै ठाउँमा भेला भएर सुत्न थालेका छन् । ‘हामी आ–आफ्नो घरमा बस्न सकिरहेका छैनौं, भोक न निद्रा भएको छ,’ कान्छीमायाले भनिन्, ‘गाउँको मनोज फियाकको घरमा सबै गाउँले भेला भएर रात बिताउने गरेका छौं ।’कान्तिपुर दैनिकमा समाचार रहेको छ ।
पछिल्लो अपडेट – भाजपाले ३४५ सिट जित्दा काँग्रेसले ९६ सिट जित्यो